काठमाडौं । चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई आज बालुवाटारमा पूजाआजा गरेर चितवन पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यले ती मूर्ति च ...
काठमाडौं । आज चैते दशैँ । प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने यस पर्वमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरिन्छ । चैते दशैँ पर्वका अवसरमा आज हिन्दु धर्म मान्ने नेपालीले घर घरमा दुर्गा भगवत ...
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा २ न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु कुमार चु ...
आज २०७८ वैशाख ६ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ ।सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक केही बेरअघि सुरु भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ...
सरकारलाई तत्काल विद्यालय बन्द गराउन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संसदीय समितिले बालबालिकाहरू कोभिड—१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारू हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रि ...
हुरीसँगैको चट्याङबाट दुइ जनाको मृत्यु
काठमाडाैं । हावाहुरीसँगै परेको चट्याङका कारण बाग्लुङ र स्याङ्जामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै बिहिबार राति परेको चट्याङका कारण एकजना घाइते भएका छन् । बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका–२ स ...
यस वर्ष पनि रोकियो विक्रमबाबा मेला
चितवन । हरेक वर्ष चैते दशैँका अवसरमा लाग्ने विक्रमबाबा मेला यस वर्ष पनि बन्द गरिएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र लाग्ने सो मेला कोरोना जोखिमका कारण बन्द भएको हो । सरकारले २५ भन्दा बढीको भ ...
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सहभागी कुम्भमेलामा सहभागी हजाराैंमा कोरोना पुष्टी, ज्ञानेन्द्रको पनि परिक्षण गरिँदै
हरिद्वार । कुम्भमेलाका लागि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला भएको भारतको हरिद्वारमा केही वरिष्ठ सन्तसहित एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ । दुई महिनासम्म चल्ने उ ...
पृथ्वी सुब्बाको पद धरापमा परेपछि एकाएक प्रदेश सभाको अन्त्य
पाेखरा । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार राती मध्यरातमा प्रदेश सभाको अधिवेशन रोक्न सभामुखलाई पत्र पठाएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको आयु केही दिन लम्बिएको छ। विहीबार प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब ...
काठमाडौँ । सरकारले सिरुवा(पवानी पर्वको उपलक्ष्यमा बिहीबार पाँच जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा र सप्तरीमा सार्वज ...
आउँदो बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्छः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको प्रमुख कर्तव्य नागरिकको जीवन रक्षा गरेको बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त् ...
आज नयाँ वर्ष
काठमाडौं । नेपालीहरूको नयाँ वर्ष २०७८ आज शुरू भएको छ । आज विक्रम संवत २०७८ को पहिलो दिन वैशाख १ गते नेपालीहरूले एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गरी हर्षोल्लास साथ मनाउँदै छन् । आज सूर्यले मीन राशिको भोग ...
नोबेल अस्पताल तनाबग्रस्त, ७ दिनदेखि शिशुको शव अस्पतालमै
विराटनगर । नोबेल मेडिकल कलेजमा प्रसुतिका क्रममा शिशुको मृत्यु भएपछि आफन्तले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले ७ दिनदेखि शिशुको शव जिम्मा नलिई आन्दोलन जारी राखेका छन् । चिकित्सकको लापरवाहीका कारण शिशुक ...
यस्ता छन् आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेण्डा
काठमाडौं। मन्त्रिपरिषदको बैठक आज साँझ बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नियमित बैठक बस्न लागेको हो। नयाँ प्रजातिको कोभिड संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्ने थप क ...
ढलेकै अघिल्लो दिन खुल्ने भयो 'नयाँ' धरहरा
काठमाडौं । २०७२ सालको भुकम्पले ध्वस्त पारेको धरहराको पुनर्निर्माण सकिन लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःनिर्मित धरहराको आगामी ११ वैशाखका दिन उद्घाटन गर्ने भएका छन् । ६ वर्षअघि भूकम् ...
चितवनमा दुर्घटनामा परी ७ को मृत्यु, २५ घाइते
भरतपुर । चितवनमा आइतबार भएका दुईवटा दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । आइतबार बिहान भरतपुरबाट शारदा नगरतर्फ जाँदै गरेको म्याजिक लंकुमा दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको थियो भने साँझ ट्याक्टर द ...
काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसदीय समितिहरूमा रहेका सदस्यहरूको हेरफेरको सिफारिस गरेको छ । गत फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले ठूलो दलको हैसियतमा रहेकाले नेकपाका संरचनाअनुसारको समितिका सदस्यहरू ...
नयाँ वर्षकै दिन राष्ट्रपतिबाट विभूषित हुँदै ४५२ जना
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वैशाख १ गते विभिन्न मानपदवी प्राप्त गर्नेमध्ये ४५२ जनालाई विभूषित गर्ने भएकी छन् । विभूषण ऐन, २०६४ को दफा ४ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको ...
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडेजात्रा पर्व आज मनाइँदैछ । उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फेरि बढ्न थालेकाले एक तिहाइलाई मात्र कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको नेपाली सेनाले ज ...
दमौली । तनहुँको भानु नगरपालिका–४ स्थित आहालडाँडा सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा लिइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल २३ नं मनकामना गणबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा वनमा लागेको डढेलो नियन् ...
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको १४ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेल ...
पत्रकार महासंघ ललितपुरमा न्यौपाने प्यानल विजयी
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुरको अध्यक्षमा सागर न्यौपाने नेतृत्वको प्यानल नै विजयी भएको छ । न्यौपाने प्रेस संगठनका नेता हुन् । मत परिणामको औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी छ । मत परिणाम घोषण ...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भक्तपुरमा मनाइने बिस्केट जात्रा (बिस्काः जात्रा) नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै जात्रा रोक्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा ...
पातञ्जल विपद राहत कोषको संरक्षकमा डा. पोखरेल, ५ वर्षभित्र १ करोड पुर्याउने लक्ष्य
भक्तपुर। पातञ्जल योग समिति नेपालले ५ वर्षभित्र १ करोड रकम पु¥याउने लक्ष्यका साथ पातञ्जल विपद राहत कोषको स्थापना गरेको छ । झण्डै २१ लाख रकम संकलन भैसकेको कोषमा पातञ्जल योग समिति नेपालका संरक्षक बा ...
आजदेखि इमाडोलमा खुल्ने भयो थ्रीडी आर्ट म्युजियम
ललितपुर । नेपाली कलाकारको कला संयोजनबाट नेपालमै पहिलोपटक स्थापना गर्न लागिएको थ्रीडी आर्ट संग्रहालय आजदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । रेष्टुरेन्टको माध्यमबाट नेपालमा थ्रीडी आर्ट कलालाई नेपाली बजारमा चिन ...
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन आज हुँदैछ । देशभरका संचारकर्मीहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व चयनका लागि आज हुने निर्वाचनबाथट केन्द्रीय समिति, १० वटा प्रदेश समिति, सबै जिल ...
विश्वकै प्रदूषित सहरका रूपमा 'प्रसिद्धि' कमाउँदै काठमाडाैं उपत्यका
काठमाडौं । पछिल्लो दुई सातायता देशैभरी वायु प्रदुषणको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ। गत बिहीबार साँझ पूर्वी तथा मध्य नेपालमा भएको वर्षाले प्रदुषण केही घटेपनि आइतबारदेखि फेरि प्रदुषण बढेको हो। काठमाडौं ...
प्रचण्डपक्षको झिनो आशामा सर्वोच्चको तुषारापात, माधव पक्षलाई पनि झड्का
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदरको आदेश पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढु ...
यी तीन न्यायाधीशले गर्दैछन् प्रचण्डको रिटमा सुनुवाइ, आदेश सदर गर्नसक्ने अनुमान
काठमाडौं । नेकपा पार्टी विवादका बारेमा तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाई आज हुँदैछ । उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजालन नं. पूर्ण १ म ...
सेनाले सुरु गर्यो चार ‘स’ को सूत्रसहित पूर्वसैनिकको काम
महोत्तरी । नेपाली सेनाले पूर्वसैनिकका लागि चार ‘स’ को सूत्रमा काम भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । महोत्तरीको बर्दिवासस्थित मध्यपूर्वी पृतना हेड क्वाटरमा पूर्वसैनिक सम्मेलन कार्यक्रममा प्रधानसेन ...
पत्रकार महासंघ निर्वाचनः शर्माको प्यानलको उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घको आसन्न केन्द्रीय निर्वाचनका लागि प्रेस चौतारी नेपाललगायत नौ वटा पत्रकारका सङ्गठनले उम्मेदवार घोषणा गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस मञ्च नेपाल, मिडिया नेपाल, जन ...
ललितानिवास जग्गा प्रकरणः सर्वोच्चद्वारा मन्त्रीपरिषद् निर्णयको सक्कलप्रति झिकाउन आदेश (आदेशसहित)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयु ...
किन हुँदैछ त भोलीदेखि चारदिनसम्म सम्पूर्ण विद्यालय बन्द ?
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका शिक्षण संस्था चार दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण निकै बढेको कारण& ...
सर्वोच्च परिसरमा नयाँ घटना, अर्काको मुद्दामा लड्ने २ वकिल आफ्नै लागि हात हालाहालमा उत्रिए
काठमाडौं । छोरी पढाउन दिएको पैसा नदिएको विषयमा विवाद हुँदा सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र दुई अधिवक्ता बिच कुटाकुट भएको छ। सधैं अर्काको मुद्दामा वैचारिक बहस गर्ने वकिलहरु आफैं आफैं सर्वोच्च परिसरभित्रै लड ...
आज तराई होली
काठमाडौं । फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज तराईका जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ एकापसमा रङ खेली मनाइँदैछ । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत र ...
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना अन्ततः पूरा भएको छ । काठमाडौंबासीलाई मेलम्ची खोलाको पानी घरका धारामा थाप्ने सपना भट्टराईले नै देखाएका थिए । मेलम्ची खानेपानी आयो ...
घरको धारा खोल्नुस् त पानी आयो कि ? आजदेखि कहाँ-कहाँ आउँदैछ त मेलम्चीकाे पानी ?
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्काका विभिन्न स्थानमा आजबाट मेलम्चीको पानी आउने भएको छ । उपत्काका सीमित ठाउँमा मात्रै अहिले पानी आउन थाल्ने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले जनाएको छ । पहिल ...
आज होली, देशका पहाडी र हिमाली भेगमा रंग खेल्दै मनाइँदै
काठमाडौं । फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ एकापसमा रङ र लोला खेली मनाइँदैछ । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भा ...
अस्पतालकै क्याबिनमा बिरामीलाई दुर्व्यवहार गर्ने डाक्टर पक्राउ
सप्तरी । शिशु बालिकालाई जचाउन गएकी २५ वर्षीया महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शुक्रबार प्रहरीले चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ । उपचारका बहानामा यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा राजविराजस्थित छिन्नमस्त ...
मुलुकले इमान्दार राजनीतिज्ञ गुमाएको छः राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इमान्दार एवं स्वच्छ छवि भएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको असामयिक निधनमा दुःख व्यक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आज बिहान ...
विशेष प्रहरीमा सयभन्दा बढीका लागि खुल्यो जागिर (सूचनासहित)
२०७७ चैत्र १३ गते
काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले एक सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहेको विभागले शुक्रबार सूचना निकालेर अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहाय ...
अध्यक्ष ओलीले गरे संसदीय दलको बैठक आह्वान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका छन् । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दलको बैठक बोलाइएको उपनेत ...
मध्यपुरको जनगुनासो सम्बोधन गर्दै सांसद बस्नेत, एकैदिन ६ आयोजनाको अनुगमन
मध्यपुर । विकासका पर्यायवाचीका रुपमा चिनिएका भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेत पछिल्ला दिनमा मध्यपुरको विकासमा खटिएका छन् । पछिल्लो २ वर्ष मध् ...
के–के हुन् त भारतबाट नेपाल फर्कनेका लागि गृह मन्त्रालयको ३ शर्त ?
काठमाडौँ - छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च गतिमा बढ्दै गर्दा त्यसको असरले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर भयावह बन्ने जोखिम देखिएको छ । अहिले पनि मुलुकका ३० सीमा नाका खुला छन् । ती ...
नेकपा खारेजको फैसलाको पुनरावलोकनमा जाँदै माओवादी केन्द्र
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जार्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको केन्द्रको बैठकले फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको नेकपा खारेज गर्नेसम्बन्ध ...
देशभरका केही ठाउँमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभावले मंगलबार देशका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने भएको छ । पश्चिमी वायुसँगै स्थानीय वायुक ...
राष्ट्रपति भण्डारी ढाकामा, दिनभर महत्वपूर्ण भेटघाटमा व्यस्त
काठमाडौं । दुई दिने राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा निस्किेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बंगलादेशको ढाका पुगेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको निमन्त्रणमा बंगल ...
पूर्वमन्त्री शर्मालाइ मातृशोक
दाङ । प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्मालाई मातृशोक परेको छ । पूर्वसङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री शर्माकी आमा पार्वता पौडेलको ७४ वर्षका उमेरमा सोमबार बिहान आफ्नै निवास घोराही -१८ मसिनामा नि ...
नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरको नतिजा निस्कियो
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को नतिजा निस्किएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवश्रोत एवं प्रशासन विभागले इन्स्पेक्टरहरुको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक नतिजाअन ...